Yintoni i-zeolite kwii-aquariums, isebenza njani kwaye yenzelwe ntoni? Ngeentlanzi
Ukuhluza kwi-aquariums yinkqubo ebaluleke kakhulu yokucoca kunye nomgangatho olungileyo. Ngombulelo kumanzi acocekileyo kwaye acociweyo, iintlanzi zingaphila zikwimeko entle. Kule meko, siza kuthetha ngemathiriyeli enceda ukonyusa ukusebenza kokuhluzwa kwamanzi kwii-aquariums. Imalunga ne-zeolite. I-Zeolite sisihluzo sesiseko sokusebenza esisebenza kwinkqubo yokuhluza amanzi iphezulu kunaleyo ifunyenwe ngeefilibhloni zecarbon okanye zesanti. Ukongeza, yimveliso yendalo.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba i-zeolite isetyenziswa njani kunye neemfuno eziyifunayo, kwesi sithuba ungazi yonke into ngokunzulu a
1 Iimpawu zeZeolite
3 Ukugcinwa kunye neemfuno
4 Xa UNGAYisebenzisi i-zeolite kwi-aquarium yakho
Ubume be-zeolite benziwe ngamaminerali avela kwizakhiwo zentaba-mlilo. Yenziwe ngamaminerali kunye neekristali ezinamandla aphezulu otshintshiselwano nge-ion. Ukuba sihlalutya ulwakhiwo lwangaphakathi lwezi zinto, sinokujonga amajelo amancinci amalunga ne-0,5nm ubukhulu. Oku kumenza azithathele ingqalelo into enemiqolomba efanelekileyo yokucoca amanzi. Ngale ndlela kunokwenzeka ukuba kususwe ubumdaka obunokuhanjiswa ngamanzi anqunyanyisiweyo ukuze i-aquarium ihlale icocekile ngokupheleleyo.
Ulwakhiwo lugqityiwe ngamacandelo aliqela aqukethe ezinye iiperesi zobubanzi obukhulu. Ineneni kukuba umthamo we-ion-exchanger owenza ukuba ukufunxwa kwezinto ezingcolisayo ezikhoyo emanzini kunye nokucoca okunokwenzeka.
Kukho iintlobo ezininzi ze-zeolite. Kuxhomekeka kuhlobo esilunyangayo, kunokwenzeka ukuba ukhuphe amanzi kwizimbiwa ezithile ezinje ngecalcium. Oku kuvumela ubulukhuni bamanzi ukuba buthambe kancinci kwaye bonyuse umgangatho wawo. Kwelinye icala, ii-pores ezinkulu Bayakwazi ukugcina amasuntswana anqunyanyisiweyo. Uninzi lwala masuntswana zizinto kunye neemolekyuli zohlobo lwezinto eziphilayo, ezinjenge-ammonia, kwaye lunokunciphisa umgangatho wamanzi.
Ulwakhiwo lwezixhobo zokucoca ulwelo
Nje ukuba sazi iimpawu ze-zeolite, siya kuqhubeka nokusebenza. Siyakhumbula ukuba yi-substrate ekwaziyo ukutshintshisa i-ammonia kwaye isebenza ngokwahlukileyo emanzini amatsha okanye anetyuwa. Kubalulekile ukuba wazi umsebenzi we-zeolite ngokuxhomekeke kuhlobo lwe-aquarium esiza kuba nayo.
AmaZeolites angabananisi becalcium ziyakwazi ukufunxa iikhompawundi ze ammonia ikhona kubukho obuphantsi be-calcium kunye ne-magnesium ion. Oku kwenzeka kwiindawo ezinamanzi amatsha.
Kwelinye icala, ukuba sikhetha amanzi olwandle, inkqubo yahluke ngokupheleleyo. Kolu hlobo lwamanzi, ubukho becalcium buphezulu kakhulu kunamanzi amatsha. Ke ngoko, i-zeolite kolu hlobo isebenza njenge-substrate encinci ye-biology. Ukongeza, ngaphezulu komhlaba iyakwazi ukugxila kwiibhakteria ezininzi eziguqula ngokukhawuleza i-ammonia kwi-nitrite kwaye le ibe yi-nitrate. Kule meko, ingaphakathi le-zeolite ine-oxygen oxygen concentration. Kungenxa yokusetyenziswa kakhulu phesheya. Ngesi sizathu, iibhaktheriya ezihlala kwezi ndawo zine-autotrophic ngokupheleleyo kwaye ziyakwazi ukwenza ukutya kwazo. Baphinde basuse i-nitrate bayiguqula ibe yi-nitrogen ekhulayo ngoncedo lwekhabhoni.
Ukugcinwa kunye neemfuno
I-Zeolite ayinakuphela, kodwa iyathoba ngokuhamba kwexesha kwaye iphulukene nokusebenza kwayo. Kungenxa yokuba iikholoni zebacteria ziyazala kwakhona ukuya kwinqanaba lokuvala ii-pores ngaphezulu. Ngama-pores avaliweyo, amandla ayo okucoca ulwelo ancitshisiwe ukuya kwinqanaba lokungawenzi umsebenzi wawo.
Esi sizathu sokuba i-zeolite ifuna ukugcinwa. Nje ukuba iqale ukusilela kwinkqubo yokucoca amanzi, kufuneka itshintshwe. Ngexesha lesigaba sokugqibela sokulayisha, ukubola kweebhaktiriya kuphucula ukusebenza kwe umtyibilizi izihlwele ezikhulu zenkunkuma ziyavela kumphezulu kwaye zisuswe ngokukhawuleza ngamanqatha olwandle.
Xa i-zeolite isetyenziswa kwi-aquarium ukunceda ekucoceni Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ngokuthe ngcembe. Oko kukuthi, awusoze uqale ukucoca amanzi ngayo yonke imithwalo ye-zeolite. Kungenxa yokuba amandla ayo okucoca amanzi anokuchaphazela iintlanzi esele zilungelelaniswe neemeko ezithile kwi-aquarium.
Bonke abavelisi bezeolite bacebisa ukuba ukufakwa kwayo kwenziwe kancinci kancinci, ngaphezulu kweeveki, ukuze iintlanzi zikwazi ukuziqhelanisa nomgangatho wamanzi amatsha. Njengoko ixesha lihamba emva kokufaka i-zeolite kwi-aquarium, ibhaktheriya ivelisa umsebenzi omkhulu. Xa umsebenzi wayo ufikelela kumaxabiso aphezulu, bonakalisa ukulondolozwa kwexabiso lokunciphisa i-oksidi ye-aquarium. Oku kungenxa yokusetyenziswa kweoksijini ephezulu abanayo.
Xa UNGAYisebenzisi i-zeolite kwi-aquarium yakho
I-Zeolite kunye nekhabhoni esebenzayo
Iingcali ezininzi ze-aquarium ziyavumelana ngegalelo elikhulu elinalo eli lwazi kwi-aquarium entsha. Nangona kunjalo, nakwiindawo zamanzi ezintsha, ukongezwa kwe-ammonia kwindawo ephakathi kubangela ukuba i-zeolite kufuneka isebenze njengesiseko sexesha elifutshane.
Ngakolunye uhlangothi, xa amanqanaba e-ammonia ezinzile, kulungile ukususa i-zeolite. Akukhuthazwa ukuba uyisebenzise njengesiseko esisigxina. Endaweni yoko, kungcono ukuyisusa kwaye usebenzise iindlela eziqhelekileyo. Phakathi kweendlela eziqhelekileyo sifumana i-carbon okanye isanti.
Ezi zihluzo zinokuxhonywa ngendlela elula kakhulu ngaphakathi kwifilitha yoxinzelelo kwaye zivumele ulawulo lombala we-aquarium, ukongeza kwinto ekhankanyiweyo nge-ammonia kunye neefilitha zebhayiloji. Zisebenza ngokukuko kwezo ndawo zinabantu abaninzi, kuba kwezi ndawo imisebenzi yolondolozo iya kufuneka ngenxa yokugqitha kwemolekyuli yenkunkuma.
Kubalulekile ukunqanda iingxaki ezinokuzivelisa ngenxa yesikhundla sayo esikhulu sokutshintshiselana ngeemolekyuli. Yayo, Kuya kufuneka siyifake kancinci kancinci ngaphezulu kweeveki ezininzi. Ngale ndlela, siza kube silungiselela iintlanzi ngaphakathi ukuba zikwazi ukuziqhelanisa notshintsho lweekhemikhali kwindalo esingqongileyo.
Kufuneka kuthethwe ukuba ngenxa yomsebenzi webhaktheriya, akukhuthazwa ukuba ugcine i-zeolite efakwe ngaphezu kweenyanga ezintathu.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso ungazisebenzisa ezi zinto ziluncedo ekuncedeni ukuhluza i-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Zeolite